Indlu enhle ye-Llanbedr - I-Airbnb
Indlu enhle ye-Llanbedr
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Oscar
U-Oscar Ungumbungazi ovelele
Indlu enamakamelo amathathu edolobhaneni elihle enhliziyweni ye-Snowdonia. Ukugxuma okufushane olwandle (isiqhingi segobolondo esiseduzane) esinama-pubs amathathu asendaweni wonke ahamba ibanga lokuhamba. Futhi itholakala endaweni ekahle eduze komgwaqo ophakeme kunawo wonke emhlabeni! Kukhona ukubukwa okumangalisayo kanye nenqwaba yohambo oluhle lwezwe. Indlu ingamakhilomitha angu-5 ukusuka eHarlech kanye namamayela angu-5 ukusuka eBarmouth, iyindawo ekahle phakathi futhi inikeza kokubili izinzuzo zokuphunyuka kwezwe kanye neholide lolwandle. Indlu enobungani bezinja! Futhi kuvinjwe ukufinyelela.
Amakamelo okulala amathathu, anombhede owodwa olingana inkosi kanye nemibhede emibili emikhulu ephindwe kabili. Igumbi lokuhlala elikhulu elivulekile, ikhishi kanye namagumbi okugeza amabili. Konke okunothando okulungiselelwe izivakashi zethu. Leli kwakuyikhaya likamkhulu wami futhi linezinkumbulo eziningi ezijabulisayo, sithemba ukuthi izivakashi zethu zizoyijabulela indlu futhi zizenzele izinkumbulo ezinhle!
4.82 · 56 okushiwo abanye
Idolobhana liyindawo ethule ethandekayo yokuphumula futhi ujabulele bonke ubuhle bemvelo bepaki ye-Snowdonia National. Inesikhungo esinemingcele yangaphandle ibanga lokuhamba imizuzu emi-5 namabhishi amabili aseduze kakhulu nendlu. Kanye ne-Rhaeadr Nantcol Waterfalls engaphansi kwemizuzu eyi-10 ukusuka lapho. Kukhona nesitolo esigodini kanye negumbi letiye elihle. Ekugcineni kunezindawo zokucima ukoma ezintathu edolobhaneni zonke ezihlinzeka ngokudla nezingadi zikabhiya zangaphandle.
Ungaxhumana naye ngocingo noma ngohlelo lokusebenza lwe-Airbnb ngesikhathi uhlala.
UOscar Ungumbungazi ovelele